7 months, 3 weeks ago 2080 Qoodi
Barreessaa Gargaaraa Dhimma Alaa Ameerikaa kan ta'an Robart Godeek marii paanaalii Seenaataroota Ameerikaarratti akka dubbatanitti bulchiinsi Joo Baayidan Itoophiyaa fi Eertiraa irratti qoqqobbii dabalataa kaa'uuf qophaa'aa jiraachu beeksisaniiru. Godeek, rakkoo naannoo Tigraayitti uumame 'suukkanneessaa' jechuun ibsaniiru.
Ameerikaan humnoonni markattoota walitti bu'iinsa akka dhaaban, sarbamiinsa mirga namoomaa akka dhaabaniifi gargaarsa namoomaa miidhamtootaaf akka qaqqabu waamicha gooteetti. "Dhimmoota kanneen irratti foyya'iinsa arifachiisaa yoo argamu baatee qoqqobbii dabalataa ni keenya," jedhaniiru, Godeek.
Godeek, ajjeechaawwan gara jabeenya, gudeeddii garee naannoo Tigraayitti raawwataman balaaleeffataniiru. Loltoonni mootummaa naannoo Amaaraa dirqamaan ummata buqqaasaniiru jechuunis komataniiru.
Mootummaan Ameerikaa waggoota hedduuf Gaanfa Afrikaa keessa biyya 'michuu' taateefi turte Itoophiyaa irratti anga'oonni biyyatti akka Ameerikaa hin seenne qoqqobbii Viizaa fi diinagdee kan keesse yoo ta'u, ammallee anga'oota fi ajajoota waraanaa Itoophiyaa fi Eertiraa irratti qoqqobbii dabalataa kaa'uun itti yaadaa akka jirtu Godeek ibsaniiru.
Pirezdaantii Ameerikaa Joo Baayidan kaleessa dhimma rakkoo siyaasaa Itoophiyaa ilaalchisee ibsa Waayt Haawus irraa baasaniin, tokkummaa Itoophiyaa eeguufi biyyattii gara tasgabbiitti deebisuuf marii siyaasaa hunda hirmaachisaa ta'e gaggeessuun akka barbaachisu ibsu isaani ni yaadatama.
Itoophiyaa Joo Baayidan Ameerikaa Lola Tigraay
May 27, 2021, 5:28 a.m.
6 Obbo Lammaa Magarsaa tibbana VOA Afaan Oromoo waliin gaaffiif deebii taasisaniiru?